Global Voices teny Malagasy » Misavoana Ambony ny Fisandratan’i Papi Jiang Olomalazan’ny Aterineto Shinoa (Vao Avy Tratran’ny Sivana) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2016 5:11 GMT 1	 · Mpanoratra Travis Meng Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
“Tena hakalo mihitsy ny ray amandreniko tamin'ny nanomezany ahy izao endrika meva izao!” Dika sary anefijerin'i Papi Jiang nandritra ny fanaovany ny “Tsy fantatrao ny fijelian'ny tsara tarehy”.
Raha tsy mavitrika ao amin'ny tranonkala Shinoa ianao dia tsy handre velively momba an'i Papi Jiang. Iray amin'ny olo-malaza indrindra an-tserasera ao Shina izy, fantatra amin'ny lahatsary mpananihany miresaka haingana ny fiainana andavanandro, ny fifandraisan'ny olona samy olona, sarimihetsika ary ny olana ara-tsosialy.
Ao Shina, tsy maintsy voamariky ny manampahefana anefa ny malaza tahaka izany, ary lasibatry ny mpanao sivana aterineto ao amin'ny firenena izy tamin'ny volana lasa teo, izay nanaisotra ny sasany amin'ireo lahatsariny  avy ao amin'ny Youku, sehatra lahatsary malaza indrindra ao Shina.
Ao ambadiky ny sarintavan'i Papi Jiang no misy an'ilay Jiang Yi Lei, 29 taona nahazo dilpaoma tao amin'ny Akademia Foiben'ny Tantara Tsangana ao Shina. Efa nahazo mpanjohy 11 tapitrisa ao amin'ny tranonkalan'ny media sosialy Sina Weibo ny lahatsariny, izay amoahany fitenenana irery na fakana tahaka ireo olona fanta-daza ary ataony amin'ny fitenenana mafy sy haingana dia haingana mampiavaka azy izany.
Tamin'ny oktobra 2015 no nanombohan'i Papi Jiang namoaka lahatsary, ary tao anatin'ny volana vitsivitsy monja dia izy no nalaza an-tserasera indrindra. Amim-pireharehana no anondroany ny tenany ho “sipa lany zara” (sheng nu), voambolana maningana ilazana ny vehivavy tokatena mihoatra ny 30 taona. Maro amin'ny lahatsariny malaza no mifantoka amin'ny fahadisoam-panantenan'ny tanoravavy an-tanandehibe eo amin'ny fivoaran'asany, fianakaviana, ary ny fifandraisana ara-pitiavana. Matetika izy no manompa sy mampiasa teny tsy maotona mandritra ny fampisehoana ataony.
Anisan'ny amantarana an'i Papi Jiang ity lahatsary navoaka tamin'ny YouTube eto ambany ity. Mitondra ny lohateny hoe “Tsy hainao ny fahoarian'ny tsara tarehy” ity lahatsary maneso miteny irery maharitra iray minitra sy sasany ity:
Ny fomba fiteny adala ao amin'ny lahatsary no lazain'ny sampan-draharaham-panjakana ao Shina misahana Gazety, Famoahana, Radio, Filma ary Televiziona (SAPRFT) anesorany ny ankamaroan'ny lahatsary navoakany tamin'ny volana lasa teo. Nilaza ny mpanao sivana fa afa-miverina ny lahatsariny raha esoriny ny fampiasany ireo teny mivandravandra loatra.
Vao iray volana monja mialoha ny nandabohana ny lahatsariny dia nahazo RMB 12 tapitrisa yuan (tokony ho 1,83 tapitrisa dolara amerikana) avy amin'ny maro amin'ireo orinasa mampiasa renivola fiaingana maro izay mampiasa vola amin'ny vokatry ny media sosialy izy. Raha nisy ny nieritreritra fa hanohintohina ny fivoaran'asan'i Papi Jiang ny hetsika nataon'ny SAPRFT, dia mbola niezaka ihany izy, andro vitsy taorian'ny nanivanana azy hivarotra zoro fanaovana dokambarotra  teo amin'ny sehatra famoahany lahatsary izy tamin'ny 21 Avrily amin'ny vidiny RMB 22 tapitrisa yuan (tokotokony ho 3,5 tapitrisa dolara amerikana) nandritra ny lavanty velomin'ny “Ali Auction” (Lavanty Ali), sampan'ilay goavan'ny e-varotra Alibaba.
Nanomboka teo dia tafaverina tamin'ny toerany an-tserasera tsy nahitana tenim-boto ny ankamaroan'ny lahatsariny.
Tsy ny habetsahan'ny mpiserasera aterineto ihany no mahavoalohany erantany an'i Shina , fa izy ihany koa no manana mpisera fototra amin'ny lahatsary betsaka indrindra. Araka ny nolazain'ny goavan'ny Aterineto Tencent, nahatratra 461 tapitrisa  ny isan'ny mpiserasera lahatsary tamin'ny Jona 2015 ary nahatratra RMB 11,53 miliara yuan  (1,9 miliara dolara amerikana) ny volamatin'ny tsenan'ny lahatsary tamin'ny efa-bolana fahatelon'ny taona 2015.
Tsy hitsahatra ny hiakatra izany isa izany noho ny fitomboan'isan'ny mponina ato amin'ny aterineto. Nasehon'ny tatitra farany indrindra navoakan'ny Foibe Fampahafantarana ny Tambajotra Aterineto ao Shina fa nanana mpisera aterineto 688 tapitrisa i Shina tamin'ny faran'ny taona 2015, ary nahatratra 50,3 ny tahan'ny miditra aterineto miohatra amin'ny isan'ny mponina. Mitotaly 90 isanjato ny mpisera miditra aterineto amin'ny alalan'ny finday, fitaovana manome vahana ny fanjifana vaovao amin'ny alalan'ny haino aman-jery.
Any Etazonia, namokatra ny fandaharany manokana ireo mpanome votoaty an'aterineto toy ny Netflix, Amazon ary Hulu hampihenana ny lany amin'ny fandoavana lisansa copyright. Misy fironana toy izany koa mitranga any Shina. Mifaninana mivantana amin'ny mpamokatra fandaharana amin'ny fahitalavi-panjakana ankehitriny ny mpanome votoaty an'aterineto. Ary hitan'ny orinasa madinidinika ho sarotsarotra ny mahazo tombom-barotra noho ny halafon'ny famokarana, fanofana maridrefy ary ny fividianana lisansa copyright, ka mihamaro ireo ekipam-pamokarana nampiasa ny sehatra dokambarotry ny lahatsarin'ny Youku sy Tudou hampiavosa ny vola miditra. Iray amin'ireo ohatra mazava tsara indrindra amin'izany maodely eo ampikatrohana izany i Papi Jiang.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/05/31/83329/
 nanaisotra ny sasany amin'ireo lahatsariny: https://globalvoices.org/?p=572482&preview_id=572482&preview_nonce=2c6a798693&preview=true
 hivarotra zoro fanaovana dokambarotra: http://english.caixin.com/2016-04-22/100935733.html
 461 tapitrisa: http://www.chinainternetwatch.com/17177/post-95s-video-websites/
 RMB 11,53 miliara yuan: http://www.chinainternetwatch.com/16018/mobile-advertising-online-video-revenues-q3-2015/
 tatitra farany indrindra : http://www.allchinatech.com/90-of-chinese-users-access-the-internet-via-mobile-phone-a-new-report-indicates/